नेपाल आइडलको टप ५ मा पुग्न आज रविले प्रतिस्पर्धा गर्दै, भोट गरिदिन सबैलाई अपिल | suryakhabar.com
लक डाउन उल्लङ्घनकर्तालाई अब पक्राउ होइन जहाँ भेट्यो त्यही बस्नुपर्ने
Home मनोरञ्जन नेपाल आइडलको टप ५ मा पुग्न आज रविले प्रतिस्पर्धा गर्दै, भोट गरिदिन सबैलाई अपिल
नेपाल आइडलको टप ५ मा पुग्न आज रविले प्रतिस्पर्धा गर्दै, भोट गरिदिन सबैलाई अपिल
on: १३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०७:०५ In: मनोरञ्जनTags: No Comments
काठमाडौं । जारी ‘नेपाल आइडल सिजन- २’ अन्तर्गत ‘टप ५’ मा पुग्न बाँकी ६ प्रतिस्पर्धीले आज ‘राष्ट्रिय गीत’ गाउने भएका छन् ।
गएका अंकहरुमा ‘लोक दोहोरी’, ‘पप गीत’ अाधुिनक, देउडा लगाएतका मौलिक गीत गाइसकेका प्रतिस्पर्धीले आज भने ‘राष्ट्रिय गीत’ गाउने भएका हुन् । नेपाल आइडलले सार्वजनिक गरेको यो हप्ताको ‘प्रोमो’ ले यसको पुष्टि गरेको छ । ‘प्रोमो’ मा ६ जना प्रतिस्पर्धीले नै नेपालको पहिचान झल्काउने पोसाक लगाएर गित गाएका छन् ।
यस्तै, आइडलले सावर्जिनक गरेकाे प्राेमाेमा भनेको छ ‘आज राष्ट्रियता जगमगाउने एक विषेश एपिसोड रहने छ ।’ आइडलमा रहेका ६ जनाले अा-आफ्नो सुमधुर आवाजमा फरकफरक गितहरु गाएका छन् । उनीहरुका आवाजको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । मिठो आवाजले नै प्रतिस्पर्धी आइडलको ‘टप ६’ मा पुग्न सफल भएका हुन् ।
सबैको आवाज उत्कृष्ट छ यद्यपि एकजना प्रतिस्पर्धीले शुक्रबार नेपाल आइडलको मञ्च छोड्नै पर्छ । त्यसैले शुक्रवार भोटिङका आधारमा एकजना बाहिरिदैं आइडलमा ५ जना मात्र बाँकी रहने छन् । ‘उत्कष्ट ५’ मा पुग्नका लागि ६ जना प्रतिस्पर्धीले ‘दमदार’ प्रस्तुती दिने योजना बनाएका छन् ।
यसैक्रममा सुदूरपश्चिमबाट ‘नेपाल आइडल’ मा बाँकी रहेका रवि ओडलेले आज उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने तयारीका साथ बसिरहेका छन् । अहिलेसम्म ‘खतराको सूची’ मा नपरेका रविले यो अंकमा पनि दमदार प्रस्तुति दिदैं आइडलको आगामी यात्रा सजिलै सुरक्षित गर्ने योजना बनाएका छन् ।
रविले पनि अन्य प्रतिस्पर्धी जस्तै आज राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका गीत गाउने छन् । उनले आज स्वर सम्राट नारायण गोपालको अावाजमा रहेकाे ‘विरताको चिनो’ बोलको राष्ट्रिय गीत गाउने छन् । विगतमा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिदैं स्रोता-दर्शकको मन जित्न सफल उनले बिहीबार पनि त्यही लय दोहोर्याउने आँकलन गरिएको छ ।
रविले अागामि अंकहरुमा भन्दा याे साता अाफु दमदार प्रस्तुति दिने याेजनामा रहेकाे भन्दै सबैलार्इ भाेट गरी टप ५ मा पुर्यार्इदिन अाग्रह गरेका छन् ।
रविलाई कसरी गर्ने भोट ?
रबिलाई भोट दिन मोबाइलको Message Box मा गएर १० टाईप गरी ३१००९ मा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेकपाका प्रदेश कमिटीले पूर्णता पायो, आज नाम सार्वजनिक
आफ्नो सवारी साधनको नम्वर हेर्नुहोस है, कारबाहीमा पर्नुहोला !
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०७:०५